11 Faa'ido Oo Naas Nuujinta Ay U Leedahay Ilmaha Iyo Hooyada - Aayaha
Caanaha naasku waxay siiyaan nafaqada ugu wanaagsan ilmaha.
Waxay leeyihiin qadarka saxda ah ee nafaqooyinka, si sahlan loo dheefsado oo diyaar u ah ilmaba
Hase yeeshee, heerka naas-nuujintu dunidu wuxuu ka hooseeya 30%.
Haweenka badankood waxa ay doortaan in aysan nuujin ilmahooda aqoon la’aan darteed.
Daraasad caafimaad ayaa muujinaya naas-nuujintu in ay u leedahay faa’iidooyin caafimaad oo waaweyn hooyada iyo ilmaheedaba.
Waxaan idiin soo gudbinayaa 11 faaido oo maamada iyo ilmaheedu ay heleyaan hadii hooyadu si sax ah u nuujiso ilmaheeda.
CARUURTA MAXAY FAAIIDO U LEEYIHIIN CAANAHA NAASKA?
1= Caanaha Naaska Waxay u Sameeyaan Nafaqo Wanaagsan Carruurta.
Maalmaha ugu horeeya ee dhalashada ka dib, naasuhu waxay keenaan dheecaan dheer oo huruud ah oo loo yaqaano dambarka. Waxaa ku badan caanahas borotiinka waxaana ku yar sonkorta taasoo faaido badan uleh iilmaha una fududeysa in dheefshiidka ilmaha uu si wanaagsan u shaqeeyo,
Caanaha naasku waxay ka kooban yihiin wax kasta oo uu ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horreeya noloshiisa, umana baahna wax kale in aad siiso xitaa biyo.
Kaliya naaskaada u joogtee ilmahaaga.
2= Caanaha Naaska Talaal ayey u yihiin ilmaha uu uga hortago xanuunada 6da bil ee ugu horeysa.
Caanaha naaska waxay ku dhagayaan unugyada difaaca jirka oo ka caawinaya ilmahaaga inuu la dagaalamo fayruusyada iyo bakteeriyada.
Talaalka ugu badan waxa uu ka helayaa ilmaha caanaha danbarka la yiraahdo
Danbarku wuxuu bixiyaa xaddi badan oo immunoglobulin A (IgA),oo difaaca jirka kamid ah iyo sidoo kale dhowr difaac oo kale
3= Naasnuujintu waxay yareyn kartaa Khatarta Cudurada.
Naas-nuujintu waxay yareyn kartaa khatarta infekshanka ilmahaaga iyo cuduro badan,sokorowga., wadna xanuunka,infectionada mindhicirada ku dhaca, kansarka dhiiga,xanuunada dhagaha ku dhaca iyo dhamaan xanuunada neef mareenka ku dhaca.
Cunigaada hadii aad naaska si toos ah i siiso hosbitaalada in aad la aado waad ka reysan doontaa.
4= Caanaha Naaska waxay Horumariyaan Miisaanka Caafimaadka leh.
Naas-nuujintu waxay kor u qaadaa miisaanka caafimaadka leh waxayna ka caawisaa ka hortagga cayilka caruurnimada.
5= Naas-nuujinta waxay ilmaha ka dhigtaa mid caqli badan.
Waa qodobka ugu muhiimsan ilmagaaga hadii aad waqti badan naas nuujiso wuxuu nqonayaa midka ugu caqliga badan caruurta maskaxdoodu si deg-deg ah ayey ukiri doontaa waxbarashada waxa uu ku noqon doono mid ka wanaagsan caruurta kale,dabeecad fiican ayuu yeelan doonaa.
“Ilmaba ilmaha kale inta uu ka naas-nuujin badanyahay ayuu ka caqli badanyahay”
HOOYADA MAXAY FAAIIDO ULEEDAHAY IN AY NUUJISO ILMAHEEDA.
1= Naasnuujintu waxay kaa caawineysaa hooyada buuran ineymiisaanka iska dhinto.
Laga bilaabo qiyaastii 3-6 bilood ka dib dhalmada, hooyooyinka naas-nuujiya ilmahooda ayaa la ogaadey in ay lumiyaam miisaan ka badan marka loo eego hooyooyinka aan naas-nuujin usameen ilmahooda
2= Naas-nuujintu ilmo galeenka dhalmada ka dib ayey ka caawiyaan in uu isku aruuro dhiig baxna uu san sameyn.
Naas-nuujintu waxay kordhisaa soo saarida oxytocin, hormoon taasoo keenta in muruqyada ilmo-galeenka isku aruuraan. Waxay hoos u dhigtaa dhiig-luminta ka dib dhalmada waxaana ay ka caawisaa ilmo-galeenka in uu ku soo celiyo qiyaasta yar ee hore.
3= in ay hoooyada nuujisa ilmaheeda ayaa ka hortag u ah niyad-jabka.
Niyad jabka dhalmada kadib waa nooca niyad-jabka kamid ah oo soo soobaxa wax yar ka dib dhalmada. Waxayna ku dhacdaa ilaa 15% hooyooyinka waxaana ka hortag u ah naas nuujinta.
4= Naas-nuujita ayaa yareysa in ay kugu dhacaan Kansarka naasaha, kansarka ugxan-sidayaasha iyo xanuuno kale.
Hooyada nuujisa ilmaheeda 1sano ilaa 2 sano inta udhaxaysa ayaa yareysay 50% xanuunada kansarka, dhiikarka,sonkorta,roomaatiisimada iyo xanuunada wadnaha.
5= Naas-nuujintu waxay ka hortag u tahay caadada.
Naas-nuujinta joogtada ah ayaa sidoo kale joojisa ugxanta iyo caadada.
Xayiraadda dhiigga caadada ayaa dhab ahaantii noqon karta qaabka dabiiciga ah ee ugu wanaagsan oo aad ilamaha ku kala dheereysan karto adoo isticmaalin daawooyinka uurka ka hortaga ee dhibaatada badan keeni kara.
6=Naas nuujintu Waxay kuu baajinaysaa lacag badan iyo waqti kaa bixi lahaa.
Koow waxaa kuu baaqanaysa
A=lacagtii aad masaasadaha kusoo gadan lahayd.
B=waxaa kuu baaqanaya waqti badan oo aad ku dhaqi lahayd masaasadaha.
MEEQA SANO AYAA U FIICAN IN AAD NUUJISO ILMAHAAGA?
Allaaah subxanuhu watacaala ayaa nagu booriyey in aan ilmaheena nuujino mudo 2 sano ah
Aaayada 233aad suuradda Al-baqra qaybteeda hore ayuu allah ku leeyahay
” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ”
“waalidaadka (Hooyooyinku) waxay nunjin Caruurtooda Labo Sano oo dhamaystiran Cidii doonta inay taamyeesho nuugidda,”
Hadii dhakhtar kuu diidey xaalad caafimaad owgeed in aad ilmahaaga nuujiso ama dhibaato kale aad qabto oo aan kuu ogalaaneen in aad nuujiso ilmahaaga dhib malahan markaas hadaad musaasad wax ku siiso xaaladaas owgeed cunugaadana haka wal-walin si fiican ayuu kuugu kori doonaa illaaahay idinkiis.